Amerika Avaratra · Janoary, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra · Janoary, 2008
Tantara mikasika ny Amerika Avaratra tamin'ny Janoary, 2008
Tonizia: Ny finoan'i Obama
Etazonia 30 Janoary 2008
“Tokony hanahy ve aho amin'ny fanaovana ny Islam ho toy ny zavatra mampandositra ny olona? Tsy maintsy hieritreritra ve aho fa mety hahatonga ny olona ho azo fidîna na tsia ny fivavahana arahina olona iray?” hoy ny nosoratan'i Subzero Blue avy any Tonizia, rehefa avy namaky ny voasoratry ny senatera Barack...
Hôngria : “Dia mampihoro-koditra tokoa noho i LA ve i Bodapesta ?”
Etazonia 28 Janoary 2008
Pestiside.hu no mamaly mpamaky iray avy any LA [Los Angeles, USA] izay milaza azy matahotra ny hitsidika an'i Bodapetsa : Anyway, we'll take it as a compliment. “Na izany na tsy izany raisinay ho toy ny fandòkana izany.”
Brezila: Nampihatra ny jadona i USA
Amerika Latina 26 Janoary 2008
Nanomboka namoaka andian-dahatsoratra mikendry ny handika ho amin'ny teny paortiogey ny antontan-taratasy ofisialy (an'ny fanjakana) miresaka ny nanohanan'i Etazonia ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1964 nitranga tany Brezila Luiz Carlos Azenha [pt], Amin'izao fotoana izao moa dia hita ao amin'ny tahirin-kevitry ny Sekoly Ambony momba ny fiarovam-pirenena George Washington no misy...
Obama sy ny fivavahana
Etazonia 26 Janoary 2008
“Soa fa nisy Barack Obama, mba hamaritan'ny Islam indray ny antsoina hoe “mpino” araka ny voambolana Silamo, na mila mieritreritra amin'ny famaritana vaovao anononana ny antsoina hoe ‘foko Miozolmana’ indray ny fianakaviambe iraisam-pirenena (na ny tontolo manerantany araka ny dika manta) mba ampifanarahana ny olana miatrika ny raharaha manokana ampiharina amin'iMr....
Amerika sy Shina : Martin Luther King sy Shina
Etazonia 23 Janoary 2008
Jeremiah Jenne dia mampahatsiahy ao amin'ny Granite Studio ireo teny nambaran'i Martin Luther King mikasika ny ady tany Vietnama sy Shina, izay heveriny fa fijery mbola mitombona mandrak'androany : They must see Americans as strange liberators. The Vietnamese people proclaimed their own independence in 1945 after a combined French and...
Emirà Arabo mitambatra: Mikatona noho ny fitsidihan'i Bush i Dubai
Emirà Arabo Mitambatra 17 Janoary 2008
Seabee avy ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra, no tezitra amin'ny nanakatonana ny Emirà mandritra ny tontolo andro itsidihan'ny filoha Amerikana George W Bush any. Ny tena nahatezitra azy dia faritry ny tsenambarotra maro (izany hoe mikatona ho azy ny tsena) no tena iharan'ity fanakatonana ity.
Bahrain : nandihindihy ho’aho i George W
Bahrain 16 Janoary 2008
Niserana tao Bahrain i George Bush nanditra ny fitetezam-paritra nataony tao azia andrefana, io no fitsidihana voalohany nataona filoha US tao amin’ny firenena. Misy azo antenaina hoy Mahmood: Bush is coming to town. He’ll probably fly in on a helicopter from some big tub floating in the Gulf, that the...
Rosia, Etazonia: Izay nofidian'i Kremlin raha afa-nifidy izy
Etazonia 16 Janoary 2008
Nino i Russia Blog fa raha azon'i Kremlin natao ny nandrotsa-bato amin'ity fifidianana hotontosaina any Etazonia amin'ity taona 2008 ity dia ny Senatera Chuck Hagel (Repoblikana-Nebraska) no tiany ho filoha mitondra manaraka eo: “Indrisy anefa, fa tsy nirotsaka hofidiana i Hagel na dia heveriny ho manambintana ho voafidin'ny olona ho amin'izany raharaha izany...
Jordania: Ny fanohanana an'i Hilary
Etazonia 15 Janoary 2008
Nasehon'ilay Jordaniana Natasha Tynes ny hagagany nahita ny famoahan-kevitra namalian'ny hafa azy (fahatezerana sy fahasosorana) noho ny fanohanany an'i Hilary Clinton tao amin'ny lahatsorany.
Ny fitsidihan'ny prezida Bush any Isiraely
Etazonia 11 Janoary 2008
Olmert, Bush, ary Abbas nandritra ny fikaonandoham-pandriampahalemana tao Annapolis tamin’ny Novambra 2007 at the Annapolis Peace Summit. Saryavy amin’ny United States Department of State. Tonga tao Isiraely androany (alarobia) ny filoha Amerikana George W. Bush ary tamin’ity indray mitoraka ity dia nanan-kambara ny Isiraeliana mpiteny anglisy. Fomba fijery avy hatrany...